Fosil Sport Smartwatch, uzo ozo nke yiri wear OS [ANALYSIS] | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-aga n'ihu n'ịnụ ọkụ n'obi anyị iji tụlee ngwaọrụ ndị kachasị adọrọ mmasị n'ahịa nwere ike ịdọrọ uche gị, n'oge a anyị ji elekere mara mma nke ga-adọta ọtụtụ anya maka ebumnuche doro anya, ma nke a bụ ihe na - eme mgbe akara ngosi akụkọ ifo dị ka Fosil na-agbada ala iji nye smartwatch.
Echefula ya, chọpụta n'ime anyị nyocha miri emi nke ngwaahịa ọhụrụ a nke na-abịakwute uwe bebi gị na agba na arụmọrụ.
Ka ọ dị na mbụ, Ihe mbụ anyị kpọrọ gị ka ị bịa bụ ile vidiyo nke anyị hapụrụ tinye nyocha a, n'ime ya ị ga-enwe ike ihu ọdịnaya niile nke igbe ahụ maka ịmeghe, na ị ga-ahụ otu esi ewepụta ngwa nke ya n'oge, ọ na-amasị anyị isoro ụdị nyocha a na-atọ ụtọ yana vidiyo n'ihi na ọ bụghị otu ka ị hụ ya ka ịgụ ya. Ka anyị hụ ihe miri emi Fosil Sport Smartwatch ga-enye anyị na ị nwere ike ịzụta ozugbo na ire ere dị iche iche (njikọ), ma nke mbụ ntakịrị ozi, nri?
1 Akụrụngwa na imewe: Ọ bụ elekere n'ụzọ nkịtị
2 Nka na ụzụ e ji mara: Qualcomm na-agba ọsọ eyi OS
3 Main functionalities: Ọ dịghị ihe na-efu efu
4 Nnwere onwe na eriri na-agbanwe agbanwe
Akụrụngwa na imewe: Ọ bụ elekere n'ụzọ nkịtị
Fosil choro «itu» ihe na imewe nke Sport Smartwatch, maka nke a ọ na - eji igbe abụọ, nke 41 ma ọ bụ 43 millimita dabere na mmasị ndị ọrụ, yana otu agba agba atọ: Blue, nwa na pink (pink naanị dị na ụdị 41-millimita). N'oge anyị anyị na-enyocha ihe ha kpọrọ "acha anụnụ anụnụ" ọ bụ ezie na ọ bụ kama akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, anyị agaghị abanye agha nke nkọwa nke agba. Anyị nwere brush aluminom dị elu, yana bọtịnụ atọ dị n'akụkụ, otu n’ime ha na wiilị mmekọrịta.
Okirikiri: Millimita 41 ma ọ bụ 43
Obosara: 22 mm zuru ụwa ọnụ
Eriri gụnyere: Silicone
Ejiri polycarbonate nke agba a họọrọ dị ala, yana na isi anyị na-ahụ ebe a na-ebu ibu na a ihe otiti obi. Na eriri eriri anyị ga- Rịba ama na ha dị mfe ịwụnye yana ụwa, Nke a pụtara na anyị ga-enwe ike ịgbanwe eriri wee họrọ nke kacha dabara n'oge ahụ anyị ga-eji elekere a. Okirikiri ahụ zuru oke, buru oke ibu ma nwee obere etiti na ihuenyo, Fosil emeela ezigbo ọrụ na elekere a nke na-adị ka nke ọdịnala na na obi abụọ adịghị ya na-egbo ụtọ nke imirikiti ndị ọrụ, n'etiti ndị m hụrụ onwe m.
Nka na ụzụ e ji mara: Qualcomm na-agba ọsọ eyi OS
Anyị nwere processor Qualcomm Snapdragon Uwe 3100, ihe na-amalite ugbu a na-enye anyị ntụkwasị obi na ike. Ichekwa ọdịnaya anyị ga-enwe 4GB nke nchekwa na atụmatụ ndị ọzọ dị jụụ dị ka GPS na altimita. Na nkenke, anyị agaghị echefu ihe ọ bụla na Fosil Sport Smartwatch nke na-abịa na ihe niile ịchọrọ iji mee mmemme anyị. Ibu os, sistemụ arụmọrụ maka nlele smart sitere na Google ma dabere na gam akporo.
OS: Ibu os
Sensọ: Accelerometer, altimeter, gyroscope, ihe mmetụta obi na GPS
Njikọ: NFC, Bluetooth 4.2 na WiFi
Ihe nhazi: Qualcomm Snapdragon Wee 3100
Ndakọrịta: Android na iOS site na Wear OS App,
Sistemụ nke ibu: Igwe Ọdụdọ
Na-efu ihe dị na listi ahụ? Enweghị m ike, na-atụkwasị obi na anyị na-agba ọsọ Ibu os Anyị doro anya na anyị ga - enwe ike ịme ihe niile a na - atụ anya na smartwatch lekwasịrị anya na egwuregwu. Anyị na-egosipụta ohere ịkwụ ụgwọ site na sistemụ dakọtara dịka Google Lezienụ ekele maka eziokwu ahụ ọ gụnyere mgbawa NFC, yana usoro nke sensọ nke ahụ ga-eme ka nha gị bụrụ nke ziri ezi, n'eziokwu, mgbe ejiri m ike ịhapụ ihe ọ bụla, ọ bụkwa na ọ gụnyere ọbụna WiFi iji chịkwaa ngwaọrụ anyị Spotify Jikọọ, dịka ọmụmaatụ.
Main functionalities: Ọ dịghị ihe na-efu efu
Anyị na-enyecha nyocha dị mkpa nke ọrụ ya, Oge a ekpebiri m ịkọwa ọdịiche dị n'etiti ha niile, ma ọ dịkarịa ala ndị anyị nwalere ma ha enyela anyị arụmọrụ nke bara uru iburu n'uche:
Usoro ịkwụ ụgwọ: Maka ugbu a ọ nwere njedebe na Google Pay ọ bụ ezie na anyị amaghị ma ọ bụrụ na anyị ga-eme ihe ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya. Kpamkpam ekele NFC mgbawa anyị enwewo ike ịchọpụta na ugwo usoro bụ oru oma na ngwa ngwa.
Jikwaa amamọkwa: Anyị amatalarịrị usoro ngosi Wear OS, anyị nwere ike soro ha mekọrịta ntakịrị, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ, ọkwa abịarutela obere oge.
Customizable ngalaba: Anyi nwere otutu ihe omuma, o bu ihe juru m anya banyere ulo oru dika Fosil, anyi chere na Google nwere otutu ihe.
I nwere ike igwu ya: Ọ nwere nguzogide ruru ATM 5, ị nwere ike iji ya saa ya (nke anyị kwenyesiri ike) mana ọ bụghị naanị nke ahụ, ị ​​ga-enwe ike igwu mmiri ya ma were nha metụtara egwuregwu a.
Anyị ewepula ụdị ọrụ njikwa egwuregwu ọ bụla ekele maka usoro Google Fit, nke ahụ bụ, ị ga-enwe ike ịnwale onwe gị. Omume m enwetabeghị Fosil Sport Smartwatch a.
Nnwere onwe na eriri na-agbanwe agbanwe
Anyị bịarutere na "nsogbu" ụdị ngwaahịa a niile, anyị nwere obodo kwụụrụ onwe ya ihe dị ka otu ụbọchị ma ọ bụ otu ụbọchị na ọkara, ya mere, anyị na-akwado ịkwụ ụgwọ ya kwa abalị. Ihuenyo ahụ na-adị mma nke ukwuu ịbụ ụdị onye izugbe, Ahụmahụ na-agwa m na ha ahọrọla ogwe Samsung ọ bụ ezie na anyị enweghị ozi gbasara ya, ọ dị mma na ọnọdụ niile na ndị ojii dị ọcha.
Eriri, dịka anyị kwuru, ha bụ milimita 22, Anyị nwere ike ịgbanwe ya maka eriri ọ bụla anyị chọrọ ka Fosil Sport Smartwatch anyị soro anyị abụọ gaa oriri na nkwalite ụtụtụ anyị.
Ọ dị ka elekere ọdịnala, na ọtụtụ bụ uru
Anyị nwere ogo nke owuwu na nkwa nke Fosil
Ọ bụ oké ìhè na anya ike
Achọghị m ịhapụ ihe ọ bụla na ọkwa nke ike na arụmọrụ
Wear OS bụ imerime atụmatụ mana arụmọrụ anaghị adị ụkọ oge ụfọdụ
Dị ka ọ dị na mbụ, ụbọchị batrị
Fosil Sport Smartwatch a gụnyere ihe niile elekere kwesịrị ịgụnye nke sitere na 220 euro na Amazon mana na ị nwekwara ike ịzụta na isi ala Fosil nke ire ere site na euro 249. Ọnụahịa ahụ abụghị nke kachasị ala na ahịa, mana ole na ole ga-enye nkwa Fosil na atụmatụ ndị a niile maka ọnụahịa a. Na ọkwa nke njirimara na imewe Echere m na Fosil Sport Smartwatch a na-atụ aro nke ọma karịa ọtụtụ asọmpi ahụ, na-alụ ọgụ isi na ezigbo njọ ọzọ dị ka Samsung si nọ n'ọrụ nso.
Fosil Sport Smartwatch, uzo ozo di na Wear OS
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Fosil Sport Smartwatch, uzo ozo di na Wear OS [AKW ]KWỌ]